प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए पछि ११ महिने बालकको शिक्षण अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण – Khabar Patrika Np
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए पछि ११ महिने बालकको शिक्षण अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र ०२, २०७७ समय: २३:२९:५१
काठमाडौं । शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा ११ महिने बालकलाई कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको छ । बालकमा गरिएको कलेजो प्रत्यारोपण सफल भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
काभ्रे घर भएका बालकलाई उनकै ३५ वर्षीय बुवाले कलेजो दान गरेका शिक्षण अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । वरिष्ठ चिकित्सक डा. रमेशसिंह भण्डारी नेतृत्वको टोलीले ११ महिने बालकलाई कलेजो प्रत्यारोपण गरेको हो ।
भण्डारीसहित ६० जना चिकित्सक टोलीले ८ घण्टा लगाएर बालकमा कलेजो प्रत्यारोपण गरेका हुन् । कजेजो प्रत्यारोपणका लागि फोर्टिस अस्पताल भारतका डा. विजय भिजको नेतृत्वमा चिकित्सकको टोली शिक्षण अस्पताल आएको डा. भण्डारीले जानकारी दिए ।
११ महिने बालकलाई कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको नेपालमा पहिलो पटक हो । अहिले बालक र उनका बुवाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ । बालकलाई कलेजो दिने बाबुलाई आईसीयुमा राखिएको छ ।
सुरुमा शिक्षण अस्पतालले बालकलाई कलेजो प्रत्यारोपणको लागि भारत रिफर गरेको थियो । यसको जानकारी अभिभावकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गराएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षण अस्पतालमै प्रत्यारोपण गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
ओलीले शिक्षण अस्पतालमै प्रत्यारोपणको लागि पहल अघि बढाएका थिए । गएको शनिबार दिउँसो २ बजे सुरु भएको कलेजो प्रत्यारोपण राति ९ बजे पूरा भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार बालकमा जन्मजात कलेजोमा समस्या थियो ।